“ Alliance pour l’industrialisation” tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly. Afaka midina hatramin’ny 198 Ar io araka ny fanadihadiana natao saingy ilaina hatrany ny fangaraharan’ny fanjakana sy ireo mpaninjara ara-tsolika. Tsy tokony hatao ambanin-javatra ihany koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa izay efa tena ratsy eto Madagasikara. Hatao izany rehetra izany mba hipaka amin’ny fahefa-mividin’ny Malagasy, hoy izy. Tetsy an-daniny, nanambara ireo tompon’andraikitra tao amin’ny “Alliance pour l’industrialisation” fa tena mbola marefo ny Indostria eto Madagasikara ary anisan’ny olana lehibe ny angovo. Na misy aza ireo akora fototra, hoy izy ireo dia tsy ampy ny ezaka amin’ny fanodinana. Nangataka tamin’ny fanjakana moa izy ireo ny hanajanonana ny fanondranana ny akora fototra tena ilaina sy ny mbola fanafarana atao amin’ireo izay zavatra efa misy eto hanatsarana ny tontolon’ny Indostria.